I-Euro 2020 isivalile isikhala sebhola njengoba kuvaliwe kuleli
Ngokujwayelekile, uma isizini yethu ivaliwe siyasibulala isizungu thina esithanda ibhola, ikakhulukazi ngezimpelasonto sivela kakhulu isikhala sebhola kodwa i-Euro 2020 isivalile kulokhu.
Lo mqhudelwano we-Euro 2020 oqhubekayo emazweni ahlukahlukene phesheya kwezilwandle usivale thaqa leso sikhala.
Lo mqhudelwano selokhu uqalile ngiyawulandela futhi indlela ibhola elisezingeni eliphezulu ngakhona kwenza ngilangazelele ukuyibuka yonke le midlalo njengoba sewubheke emaphethelweni.
Izinga lalo mqhudelwano likhula umdlalo nomdlalo. Kunzima nokuqagela ukuthi imiphumela izohamba kanjani ngoba kudlalwa ingcwenga yebhola. Angisayiphathi ke eyamagoli esiwabonayo, mahle ngendlela eyisimanga.
Nakuba likhona igoli engicabanga ukuthi lizowudla umhlanganiso wegoli elivelele elashawa zisuka nje emidlalweni yamaqoqo, kodwa maningi kakhulu asembangweni.
Leli goli engikhuluma ngalo lishaywe uPatrick Schick weCzech Republic ngesikhathi beguqisa iScotland kweyamaqoqo. Linzima leli goli bakwethu! Indlela elishawe ngayo likhombisa ubuchule obusezingeni eliphezulu.
Ngaphandle kwamagoli amahle esengiwabonile kule midlalo, kuningi okudonse amehlo ami njengokugoduka kwezimfivilithi okubalalwa kuzo ezikaCristiano Ronaldo iPortugal ebeyivikela le ndebe.
Ompetha beNdebe yoMhlaba, iFrance nayo bayidinda ngenduku baxabana bodwa abadlali bayo. NeGermany isibuka ihlezi ekhaya njengathi nje manje.
Ukushaywa kwalezi zinkunzi kukhombisa ngokusobala ukuthi ibhola liyagingqika futhi umlando awusho lutho. Nasepalini onozinti abazibekile phansi bashaya into ecokeme kakhulu.
Nakuba bebaningi onozinti abayithathile inhliziyo yami kodwa oweSwitzerland, uJann Sommer ngesikhathi bebhekene neSpain wenza into yamehlo. Wayevimba ngisho impukane edlulayo, yahluleka yancama iSpain ukuwina umdlalo.
Kwala ngisho sekuphume ikhadi elibovu kubafana baseSwitzerland, kwaze kwalamula amaphenathi la yanqoba khona iSpain. Kodwa ngeke bamkhohlwe lonozinti owacishe wabathela ngehlazo.
Njengamanje kusele Amantaliyane azobhekana nayo iSpain bese kuthi amaNgisi abhekane neDenmark. Ngokwami engicabanga ukuthi kuzoba iqembu elizobalwa namanye enze kahle kakhulu kulo mqhudelwano ngemuva kwesigameko esibehlele kukaputeni wabo uChristian Errikson.
FUNDA NALA: UNgcobo useqede onke neChiefs, sekusele ethulwe ngokusemthethweni
Ngabona umunyu kulaba bafana nezinyembezi bebona lo mdlali wabo oqavile ecishe kuphelela enkundleni, badlala kunzima kunjalo.
Njengamanje AmaNgisi kuphela asendleleni yabo ebheke kowamanqamu. Bangamaqhawe futhi bangamasosha afela empini ngempela abadlali baseDenmark ngibathulela isigqoko.
Kufanele ukuthi ilizwe labo liziyaqhenya ngalaba bafana. Ngiyazi izoba nzima le midlalo eyandulela owamanqamu, kodwa ukube kuya ngesifiso sami, ngingajabula ukubona umdlalo wamanqamu ube phakathi kwe-Italy neDenmark.
Ukuthi i-Euro 2020 iwinwa ubani ke uma sekulapho angisenendaba. Kodwa ke ibhola alidlalwa ngezifiso nangomlomo, kuzoshiyana ukwenza enkundleni. Thina nje sizoqhubeka silibuke, bese simemeza sithi: LISENETHINI! uma seligaxele entanjeni.
Previous Previous post: UNcita uthi singqinyuzwe ngomlalisa phansi isibhakela kushona uLedwaba
Next Next post: UNotoane ukhale ngokuncishwa uNgcobo weChiefs kwamlungela